MaAmazon ari kutsva, mapapu epanyika ari pamoto! : Martin Vrijland
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 23 August 2019	• 8 Comments
Ani naani anoyeuka kuti apo mutungamiri wenyika yazvino weBrazil, Jair Bolsonaro, paakatanga simba senge wezvematongerwe enyika ane ruoko rwakaipa akaratidzwa munhau, anobva aziva kuti isu tiri kubata pano nemunhu anotsigira chirongwa chekurwisa kudyidzana. . Mumwe munhu anomiririra zvido zvevanhu vokwake. Mhando yaBoris Johnson, Thierry Baudet, Donald Trump nevamwe vese avo vane mapapiro kuruboshwe vanogona kutora mbiri, asi vanoguma vatadza, nekuti iyi ndiyo chirongwa chikuru. Zvese zvese nemunhu wese anodzivirira kana anotenda kuti kune vanorangana iro boka rakakonzera dambudziko rezvehupfumi.
Saka kana Jair Bolsonaro akataura kuti maNGO ane basa rekuvhenekera iyo moto weAmazon, ipapo iwe unogona kuona icho sepfungwa yekurangana. Mufananidzo wepasi rese wakaiswa: pasi paJair Bolsonaro, mapapu epasi redu anopisa pasina nguva.
Zvichiri kubatsira kuti tirambe tichidzokorora kuti hatina kana zano rekuti nhau dzatinoona dzichiri dzechokwadi kana kwete. Uchiri kuyeuka mupoteri achiyerera akananga kumuganho weMexico neUS? Uchiri kuyeuka here kubuda kweEbola? Isu hatinoerekana takunzwa chimwe chinhu pamusoro pazvo kana matanho ekusundirwa achinge aitwa. Ipapo matambudziko anongoerekana apera sechando muzuva. Panguva iyo yevapoteri inoyerera yakananga kumuganhu weAmerica, Ndakaratidza nyore sei iwe kuita kuti boka revanhu rioneke rakakura nesoftware; zvakare mumifananidzo yemavhidhiyo. Mazuva ano iwe unoona zvakawanda kushambadzira pane zvemagariro media senge Facebook ichipa fantorofiti software yekugadzirisa mafoto (ona voorbeeld. Izvo zviri kuramba zvichiwedzera kuve nyore kushandisa mufananidzo uye kurira. Hatife takaziva kana tiinacho hurukuro naBolsonaro kunyangwe ari uyu chaiye kana kuti isu tinongoenda kuneimwe chinja kumeso gara uchitarisa. Chinhu chiri nyore chatinotenda kuti chiteshi chikuru chevatori venhau makambani anoshandisa mazana kana zviuru zvevanhu, uye mufananidzo watinawo wevakadzi vakanaka uye vanhurume mune masutu, zvinoreva kuti tinotenda mune izvo zvatapihwa.
IAmazon iri pamoto zvechokwadi here? "Ehe, iwe uchiri kuona iyo mifananidzo !?"Zvinoramba zvichitondishamisa kuti hazvichaita kutsanangurira vanhu kuti mifananidzo haichisiri humbowo. Zvifananidzo hazviratidzi chinhu. Chiratidzo chete chauinacho paunoona mifananidzo ndechekuti wanga uchitarisa pachionioni chako. Unoona mufananidzo. Ndizvozvo. Ne software yemazuva ano, zvese zvinogadzirwa uye kugadziridzwa nekukasira. Tarisa uone vhidhiyo iri pazasi kuti uone kuti nhasi maanificha kungwara sei (AI) neural network inogona kukanganisa mufananidzo mukati memasekondi. Iyo nzira imwechete iri shure yekugadzira mifananidzo yemavhidhiyo (ona pano. Tinobheja iwe unofunga "Ehe, izvo zvese zvichave, asi ndinotenda chaizvo kuti iyoAmazon iri pamoto". Unoziva here kuti nei? Nekuti iwe unozviona pane vezvenhau uye munhau. Kutenda kwako kunoshamiswa neavo vaunoshatirisa pamusoro pazvo pavanobhadhara mutero wakadaro uye vane mabhiriyoni muaccount yavo yebhangi; iro boka diki repamusoro. Iwe uchaona zvichishatisa kuti kune boka shoma revanhu vakapfuma avo vari kukwezva hupfumi hwese, asi iwe unofuratira chokwadi chekuti ivo vane makuru makuru enhau uye internet senge chinhu chekutamba nacho.
IyoAmazon iri pamoto here? Hatizive! "Hongu, asi ini ndinoziva munhu anogara ipapo anozvisimbisa"Inzvimbo ipi inogara munhu iyeye uye aripo pamusiwo kuti acherechedze moto kana iye munhu iyeye anowana ichi nhau kubva munhau? "Ehe, asi muBrazil havazonyepe nezve chimwe chinhu chakadai? Ndiani anobatsirwa kubva pane izvozvo? Kana Bolsonaro aifanira kuenda, haizo midhiya yeBrazil haizoputse zano here?", Unogona kupokana. Ipapo unokanganwa kuti, sezvakangoita kuUSA naDonald Trump (uyo anonzi anopesana nekurwisa kwakanyanya), vezvematongerwo enyika vanongori vatambi vanofanirwa kuramba vakataridzika uye kuita kwavo vachiita pamwe chete nevezvenhau uye dzimwe nzira dzezvenhau. Iwe haungauye pasimba kana usiri pawn yemasangano eropa. Izvo zvinogona kuenda zvakanyanya kune vakawanda, asi tarisa pane yangu yazvino nyaya paUrsula von der Leyen, mutungamiri mutsva weEU (ona. pano) uye uwane kuti inoshanda sei.
Midhiya iripo kutamba vanhu uye kusimudzira kunyepedzera kwekufungidzira. Vezvematongerwo enyika uye vezvenhau vanotamba nhabvu inocherekedza zvinyorwa zvaTenzi uye inofanirwa kutungamira ruzhinji munzira yakatemerwa, vasingazivi kuti inoridzwa nguva yakazara kuburikidza nekuita, kunyepa uye kunyengera.
Iyi "yeAmazon brand" inofungidzira inongotenderedza kutaridzika kwezvematongerwo enyika uye kugadziriswa neiyo brand kurudyi. Pakati pezvimwe zvinhu, ini ndine tsananguro yakadzama yeichi chiitiko uye tsanangudzo yemutengesi kurudyi ichi chinyorwa kupihwa. Verenga chinyorwa ichocho zvakare uye uwane maitirwo emitambo yacho.
Deepfakes chii ivo uye nguva yakadini iyo yakave yakapoteredza?
Tags: pasi, moto moto, sango rinopisa, muchiso, Featured, Jair Bolsonaro, mapapu, mazone, NGO
Anna de Zima akanyora kuti:
23 August 2019 pa 10: 09
Zvinonaka! Ndatenda nekunyora kuti zvinoenda sei ... chaizvo zvandaifunga pandakangoerekana ndaona "nhau" idzi dzichiuya ...
keazer akanyora kuti:
23 August 2019 pa 10: 11
Vhidhiyo iyoyo inondiyeuchidza zvakare kana tichigona kuvaka chimwe chinhu chakadai munyika ino kuburikidza neyakareruka revana. Zviri nyore sei kugadzira chimwe chinhu seichi kunze kwenyika ino kutaura nezve aventar?
DHBoom akanyora kuti:
23 August 2019 pa 10: 59
Shamwari yangu inogara muBrazil, zvakare muSao Paulo ... Ndakafungawo kuti ndinoda kugoverana nhau idzi newe, nekuti pakanga paine kutaura munhau dzerima sehusiku nekuda kweutsi hwese mukati mezuva. Hapana kubva kupi !! Ndamutumira iyo mepu yenhau yepamhepo yezviri kutaurwa pano uye anoti hapana kana chiri chokwadi kuti ichokwadi.
Zvinoitika sei kuti nhepfenyuro yemahara isiri isina musoro ... Chero munhu ari nyore kufunga anomboziva kuti chimwe chinhu chakadai nemubvunzo uri nyore chinogona kunyorwa senhau dzenhema nekubvunza shamwari inogara ipapo?!
Ndakanga ndine kusava nechokwadi kwangu kukuru pamusoro penhau, asi semhedzisiro yenyaya iyi ivo vakarasa zvachose kutendeseka .. Kusemesa ...
23 August 2019 pa 12: 49
Ini handikwanisi kuratidza mhinduro yako (inoshanda mune zvese), asi uchifunga kuti yako nyaya ndeyechokwadi, saka pane nguva dzose uto rakawanda rakamirira iwe (vashandi vanobhadharwa vano chengetedza nhaurirano yenhau dzenhau) kutaura zvinopesana.
23 August 2019 pa 13: 42
Ah hongu ... kana iwe uchingoda kudhonza chikwama:
Masango anotyisa moto uri mudondo reAmazon haugone kudzorwa uye achiri kuwedzera zuva rega rega. IyoAmazon inokosha kune mhuka nevanhu, uye yekurwisa shanduko yemamiriro ekunze. Ndokusaka WWF iri kutanga chirongwa chekurumidzira. Asi pamwe isu takasimba, saka batsiraiwo! Nyora AMAZONE kune 4333 ikozvino uye vape 3 euros. Iwe unogona kutumira mameseji kazhinji kazhinji sezvaunoda! Unoda kuziva zvimwe? https://www.wwf.nl/kom-in-actie/noodactie-bosbranden
23 August 2019 pa 13: 46
Ah hongu uye mushure mekudzikisira mutengo weiyo Porsche mutsva kumutungamiriri, mari yako ichave zvirokwazvo ichashandiswa nenzira inobatsira. Kune angangove nemimwe miti mitsva yakarongwa muApeldoorn mhuka paki, asi hongu nzvimbo dzakawanda dzekushambadzira dzeTV dzinofanira kutengwa uye kushambadzira kunodhura mumagazini, kuti vanhu vazhinji vave nhengo. Ichi ndicho chokwadi chakanyanya kukosha.
23 August 2019 pa 21: 20
Mubairo wepamusoro wemauto
IYO kuwedzera uye minus yakagadzira simba mune zvakasikwa nyika senge yakawanda kwazvo & minus, krisimasi / anti kristu, yakanaka / yakaipa, etcetera
Seasheprd hapana bvudzi kunze kwevamwe, vanhu vanoreva ivo vakanaka vanozvipira asi director vanoenda patafura nekambani isingazivikanwe
Mutungamiri Osama akanyora kuti:
24 August 2019 pa 00: 25
NASA inoti kune mashoma moto wemasango:
Yakadai 5.000 pachinzvimbo che15.000 12 makore apfuura.
Saka zviri pachena kuti Bolsonaro anofanira kuenda.
« Kuchave nemisoro ichizungunuka mune yeJeffrey Epstein kesi?
Chii chiri chokwadi nezvekurwiswa nerufu semhedzisiro yekufamba netsoka mu Assen? »
Kushanya kwakazara: 4.141.192
Martin Vrijland op Coronavirus covid-19: nezvatisinganzwe Maurice de Hond naWillem Engel
Martin Vrijland op Coronavirus covid-19 uye sainzi: Inopinda sei mumuviri wako uye unoitamisa sei?
AnOpen op Coronavirus covid-19: nezvatisinganzwe Maurice de Hond naWillem Engel
Adriaan W op Coronavirus covid-19 uye sainzi: Inopinda sei mumuviri wako uye unoitamisa sei?
guppy op Bhuku idzva Martin Vrijland rakanzi 'Coronavirus covid-19 izvi zvinopera kupi?' iripo ikozvino